FinaMill Warshad Wax - Joornaalka Naqshadeynta
Axad 29 Bisha Sideedaad 2021
Warshad Wax FinaMill waa warshad xoog badan oo jikada ah oo leh jajabyo udgoon oo la beddeli karo oo la buuxin karo. FinaMill waa habka ugu fudud ee kor loogu qaadi karo karinta iyadoo leh dhadhanka geesinimada leh ee udgoon ee dhulka udgoon. Kaliya buuxi jiqda dib loo isticmaali karo ee leh dhir udgoon ama geedo qallalan, ku dhaji bakeeriga meesha, kuna shiido xaddiga saxda ah ee uunsiga aad u baahan tahay adigoo riixaya badhan. Ku beddel qeybaha dhir udgoon waxyar oo qasab ah kuna sii wad karinta. Waa mid ka mid ah Furimaha Dagaalka ee dhir udgoon oo dhan.
Magaca mashruuca : FinaMill, Magaca naqshadeeyayaasha : Alex Liu, Magaca macmiilka : Elemex Limited.
Naqshaddan qaaska ah waa guuleystaha abaalmarinta naqshada platinum ee lagu ciyaaro toy, ciyaaraha iyo hiwaayadaha soosaarka alaabada.	Waa inaad xaqiiqdii aragtaa naqshadeeyayaasha naqshadeeyayaasha abaalmarinta platinum si aad u ogaato waxyaabo kale oo badan oo cusub, hal abuur leh, asal ah iyo waxyaabo hal abuur leh, ciyaaro iyo hiwaayado soo saarka naqshadeynta shaqooyinka.
Baro waxbadan oo kusaabsan naqshadan
Naqshadeynta kooxda maalinta
Kooxaha naqshadeynta adduunka ugu weyn.
Jimco 27 Bisha Sideedaad 2021
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay koox aad u weyn oo naqshadeeyayaal hibo u leh si ay ula yimaadaan naqshad runtii weyn. Maalin kasta, waxaan soo bandhignaa koox abaalmarin gaar ah ku guuleysatay hal abuurka iyo hal abuurka naqshada. Baadh oo soo hel qaab dhismeedka asalka iyo hal abuurka, nashqadeyn wanaagsan, moodal, naqshadeynta naqshadeynta iyo mashruucyada istiraatiijiyadda naqshadeynta ee kooxaha naqshadeynta adduunka oo dhan. Ku dhiirrigeli shaqooyinka asalka ah naqshadeeyayaasha waaweyn sayidyada.
Dubo Weelasha, miisaska miisaska, cabitaanka iyo naqshadaha karinta
Subscribe iyo raac
Warar si weyn loo soo agaasimay
Perception Kafeega Arbaco 22 Bisha Sagaalaad
Poise Laambad Miiska La Hagaajin Karo Talaado 21 Bisha Sagaalaad
Memento Furitaanka Warqaddu Isniin 20 Bisha Sagaalaad
Ma tahay naqshadeeye, farshaxan, naqshadeeye, hal-abuur ama maareeye shirkad ah? Ma haysaa wax naqshado wanaagsan oo aad la wadaagi karto? Waxaan aad u xiiseyneynaa inaan daabacno naqshadaha asalka ah iyo hal abuurka ka yimid nashqadeeyayaasha, farshaxanada, naqshadaha, hal-abuurayaasha iyo magacyada adduunka oo dhan. Qor naqshadaada maanta daabacan.
Bisha Sagaalaad 2021 (90)
Bisha Sideedaad 2021 (93)
Bisha Todobaad 2021 (93)
Bisha Lixaad 2021 (90)
Warar xasaasi ah
Naqshadeynta wareysiga ee maalinta Arbaco 22 Bisha Sagaalaad
Naqshadeynta naqshadda maalinta Talaado 21 Bisha Sagaalaad
Naqshadeynta maalinta Isniin 20 Bisha Sagaalaad
Naqshadeeyaha maalinta Axad 19 Bisha Sagaalaad
Naqshadeynta kooxda maalinta Sabti 18 Bisha Sagaalaad
Warshad Wax Alex Liu FinaMill
2021 Joornaalka Naqshadeynta.